Ny toetry ny fikatrohana Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2018 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Español, 日本語, English
Sarotra hazavaina ny fihemoran'ny feo Kiorda, saingy mety noho ny tranonkala Kiorda tafihan'ny mpijirika isan-karazany no antony lehibe amin'ny fihenan'ny fibilaogina. Voajiriky ny olona miantso ny tenany fa “matoatoa mampidi-doza ne mutlu turkum diyene” i IraqiKurdistan. Ary raha tsy afaka manamafy aho dia miahiahy fa namadika ny bilaoginy ho an'ireo mpamaky nasaina ihany ny From Holland to Kurdistan noho ny antony mitovy amin'izany ihany, satria nanana olana tamin'ireo mpijirika ny tranonkalany (sy ny tranonkalam-baovao amin'ny teny Holandey). Tsy ny mpijirika ihany no mampidi-doza ho an'ny fibilaogina Kiorda fa eo koa ny governemanta izay miasa ivelany ireo mpanoratra ao aminy. Ny tranonkalam-baovao The Arab Network for Kurdish Rights dia fikambanana vaovao mikasa hiaro ny feo kiorda antserasera. Eo am-panaovana fanangonan-tsonia izy ireo, izay tokony ho vonona amin'ny faran'ny volana. Mandrapaha-tonga izany, ity sombiny kely tamin'ny lahatsora-panokafan-dry zareo:
Ny fanambarana ny iraka ampanaovina ny tranonkala Hevallo dia miresaka ny tsy fisian'ny feo Kiorda ao amin'ny tranonkala:
Ary mazava ho azy, voalaza imbetsaka ao amin'ity takelaka ity ny tranonkala SaveRojTV izay miasa am-pavitrihana ho an'ny fiarovana ny zon'ny fampielezam-peo Kiorda.
Amin'ny olan'ny fikatrohana Kiorda, nahatonga ireo Kiorda ao amin'ny Kiordistan Tiorka ho ao anatin'ny alahelo lalina ny fahafatesan'ilay mpikatroka Kiorda fanta-daza, Orhan Dogan. Samy nanambara ny fahafatesana sy ny vaovao tamin'ny fandevenana i Rasti sy Hevallo.
Tiako ny hamarana ny lahatsoratra androany amin'ny sombiny kely tamin'ny tatitra mahafinaritra izay nataon'i Zaneti momba an'i Leyla Zana, mpikatroka Kiorda hafa sy mpiara-dia amin'i Orhan Dogan, :